Maxaad ka taqaanaa dadka dhulkooda Xaraashaya | allsanaag
Maxaad ka taqaanaa dadka dhulkooda Xaraashaya
Mustafe Maxamuud Cali Bile, oo ka mid noqday dadka dhulkoda xaraashaya
Dadka dalkooda, diintooda iyo dadkooda iibsaday waa arrin welligeed soo jirtay oo aad uxun. Hadaba, dadka khaa’inul wadanka ah ayeey tahay in meel looga soo wada jeesto waayoo ah ma jirto wax faa’iido ah oo ay u leeyihiin dadkooda.
Maanta, beesha Isaaq ayaa ah cadaw ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana beesha Daarood. Markii horre waxeey la safnaayeen gummeeystihii Ingiriiska, iyagoona farta ugu soo fiiqayey dhulka ay degaan beesha Daarood.
Markii labaad waxeey soo adeegsadeen beesha Hawiye, iyagoo u sheegaya ineey isla yihiin irirsamaale, ayna wadda leeyihiin hal cadaw oo ah beesha Daarood, weeyna ku guulleeysteen ineey cadaawad dhex dhigaan Hawiye iyo Daarood.
Tan seddexaad ayaa ah midda maanta ay ka waddaan Killinka Shannaad ee Soomaalida Itoobiya, iyagoo Oromada u sheegaya ineey isla yihiin Dir, ayna meel uga soo wadda jeestaan beesha Daarood.
Hadaba, dadka cadaawadda intaa la’eg u qaba beesha Daarood, iyagoo u soo maraya waji kasta ayaa waxaa ayaan darro ah in maanta ay jiraan dad ka soo jeede deegaanada Sool iyo Sanaag oo u shaqeenaya nimankaas qaba cadaawadda gaamurtay.
Waxaana laga mamaarmaan ah in farta lagu fiiqo shaqsiyaadka la shaqeeysta cadawga. Hadaba, waxaan hoos idinkugu soo gudbineeynaa liiska shaqsiyaadka denbiga ka gallay dadkooda iyo dhulkooda ee ka soo jeeda Maakhir kuwaas oo habbeen iyo maalin diyaar u ah in dadkooda ay hoos geeyeen beesha Isaaq. Taariikhdana waa in lagu qoraa shaqsiyaadka denbiga ka gallay ummaddooda ee danbiilayaasha ah.
Suldaan Siciid Ca/sallaan
Mustafe Maxamuud Cali Bile
C/risaaq Cali Ayaan
Yaasiin Cismaan Saalax
Maxamed Suldaan Xasan Cali
Maxamed Suldaan Ca/laahi Cartan
Ciise Ahmed Yuusuf (Xawar)
Maxamed Cismaan Bulqaas
Ca/qaadir Jaamac Xaamud
Cali Maxamed Aadan (Cali Barre)
Siciid Aadan (Timo weeyne)
Cali Xuseen Maxamed Soomaali (Kasoo Waantoobay Qaladkiisa)
Siciid Cali Muuse
Xuseen Faarax Aadan (Xuseen Dheere) = (Kasoo Waantoobay Qaladkiisa)
Xuseen Xaaji Cabdi
Ahmed Maxamuud Nuur (Indha Case)
Axmed Xaaji Cadami
Baar Siciid Cartan
Xayle Xaaji Diraac (Kasoo Waantoobay Qaladkiisa)
Muuse Jaamac Deelaaf
Maxamed Xasan Gaani
Ahmed Cali Jaamac (Gacmo dheere)
Cali Maxamuud Xaaji Dirir (Cali Cawar)
Maxamuud Siciid Maxamuud digafaadh
Liiska intaas kuma eka, balse waxaa weli socota ururinta shaqsiyaadka ka qeeyb qaatay denbiyada deegaanka laga galay.
← Shalay Gobolka FAAFAN maantana SANAAG Daraawiishta Puntland oo gurmad u baxay →